James Milner oo fariin u diray kooxaha kula tartamaya horyaalka Premier League – Gool FM
James Milner oo fariin u diray kooxaha kula tartamaya horyaalka Premier League
(Liverpool) 01 Okt 2018. Khadka dhexe kooxda Liverpool ee James Milner ayaa fariin u diray kooxaha kula tartamaya horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan 2018/2019.
Laacibka reer England ayaa sheegay in ay tahay wax kaliya u baahan waqti in Liverpool ay dhaliso goolal badan marka ay ku gudi jirto gudaha garoonka.
Liverpool ayaa ku guuldareesatay inay dhaliso in ka badan 1 gool kulankii ay barbaraha kula galeen Chelsea garoonka Stamford Bridge, kaasoo ka tirsanaa kulamada 7-aad horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan.
Hadaba James Milner oo wareysi dhinacyo badan taabtay siiyay shabakada rasmiga ah ee kooxda Liverpool ayaa kaga hadlay arintan, wuxuuna ku dooday in kooxdiisa ay gool dhaw la imaan doonto goolashii badnaa ee lagu yaqiinay.
“Imisa fursadood ayaan sameeneynaa waa arin aad u xiiso badan, waxaana qabaa inay muhiim tahay inaan walwalno hadii aanan sameyn lahayn fursad”.
“Waan hubaa in goor dhow goolasha ay si dhaqso ah u fududaan doonaan dhalintooda”.
Si kastaba tababare Jurgen Klopp iyo wiilashiisa ayaa sugaya markale in kulan adag ay kula qaataan garoonka Anfield horaantii Isbuuca soo aadan, kooxda Manchester City uu hogaaminayo Pep Guardiola.
Martin Keown oo amaanay tababare Unai Emery kadib is badalkii uu ku sameeyay Arsenal